ထိပ်တန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် wordpress အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင် ၂၇ ခု၊
မည်သည့် eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်မှတ်သားလောက်ဖွယ်ကောင်းသော WordPress အွန်လိုင်းစတိုး themes များဖြင့်အင်တာနက်လောက၏စွမ်းအားကိုထိပုတ်ပါ။
အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး protocols များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ အစွမ်းထက်သောစာဝှက်စနစ်နည်းပညာများ၊ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုယခင်ကထက်ပိုမိုလုံခြုံစေပြီးဖောက်သည်များကဤပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်နေကြသည်။
လူတိုင်းသည်တစ်ဘီလီယံကိုဖန်တီးသည်မဟုတ်၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပြသမှုကိုယခုပြသခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
အကယ်၍ သင့်ထုတ်ကုန်များကိုစွမ်းအင်၊ လှပပြီး၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပရိသတ်ဆီသို့စျေးကွက်တင်ရန်စွမ်းရည်နှင့်လိုလိုလားလားရှိလျှင် နှင့်ခေတ်မီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေ, လုံခြုံစိတ်ချရသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် el commerce ကိုဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်းလက်တွေ့အီလက်ထရွန်းနစ်, နောက်ထပ်မကြည့်ရှုပါ။ သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးဝဘ်ဆိုက်၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အောက်ပါဆောင်ပုဒ်စုဆောင်းခြင်းကိုစုစည်းထားသည်။
အကောင်းဆုံး WordPress အွန်လိုင်းစတိုး Themes
Jevelin ဟာ WordPress အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေးအခင်းအကျင်းဖြစ်ပါတယ်။ Jevelin ၏ WooCommerce အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပလပ်ဂင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ပါ ၀ င်သည့်စွမ်းရည်သည် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလည်ပတ်သောအွန်လိုင်းစတိုးများကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းတည်ဆောက်နိုင်စေသည်။ ဤဆောင်ပုဒ်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်ပုံစံ၊ စတိုင်၊ ကာတွန်းနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်။
SEO ကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ တစ်နေ့တာရောင်းအားကိုတစ်နေ့တစ်နေ့တိုးမြှင့်နိုင်အောင် Jevelin မှာရှုပ်ထွေးတဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ထားသည်။ > ယာဉ်ကြောအောင့ ်၍ ယာဉ်အသွားအလာကိုမောင်းနှင်ရန်နှင့်ဘာသာပြန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်နှင့် RTL ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သင့်ကိုသင်သေချာစေပါအကျယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေပရိသတ်ကို။ ဒီနေ့ Jevelin ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo Kalium
> Kalium မည်သူမဆို ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းအလျင်အမြန်စုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုပေးသော၎င်းသည်လုံးဝထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာတီထွင်ထားသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအခင်းအကျင်းသည် WPBakery ၏ Page Builder plugin၊ Revolution Slider နှင့် LayerSlider တို့ပါ ၀ င်သည်။ ပုံမှန် WooCommerce e-Commerceeplugin suite နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Kalium ကိုထုပ်ပိုးထားသည်။ အွန်လိုင်းစတိုးနှင့် eCommerce တင်းပလိတ်များအပါအဝင်အလုပ်လုပ်သောသရုပ်ပြဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တင်းပလိတ်စာမျက်နှာများမှအံ့သြစရာများစွာရှိသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်စျေးကွက်တင်ခြင်းသည်အလွန်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်ပဲထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည် Kalium ပါ ၀ င်သည့် e-commerce စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်ရွေးချယ်နေကြသည်။ ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးသင်၏စတိုးဆိုင်၏ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
TheGem ဟာဘက်စုံသုံး WordPress အခင်းအကျင်းဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာတစ်ခု၏ persity နှင့် personalization ကိုနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ မြန်ဆန်စွာတစ်ခြေလှမ်းတင်သွင်းခြင်းဖြင့် +70 သရုပ်ပြကိုကြည့်ပါ။ TheGem သည်တုန့်ပြန်မှုအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး pixel ပြီးပြည့်စုံသောဂရပ်ဖစ်များကိုပေးသည်။ ဆိုင်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမြင်များကို၎င်း၏ပြခန်းများနှင့်အတူသတ်မှတ်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ WooCommerce နှင့်၎င်း၏ slider ရွေးချယ်မှုသုံးခုကိုအတူတကွခံစားပါ။ စာမူများနှင့်နောက်ခံများကိုမီဒီယာဖြင့်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ စာမျက်နှာပုံစံသည်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှစာမျက်နှာများစွာအထိဖြစ်နိုင်သည်။
TheGem တွင်ဘားများရှိသည်အကန့်အသတ်မရှိနှစ်ဖက်နှင့်ဇစာဖတ်သူများနှင့်အောက်ခြေများအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရွေးချယ်စရာများ။ ဝစ်ဂျက်များနှင့်သတ်မှတ်ထားသောဇုန်များကိုလည်းရရှိလိမ့်မည်။ TheGem သည်သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လွယ်ကူစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် All-In-One စီးပွားရေးအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောသံသယများကိုသူ၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပါ။ TheGem! နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
အဲဒီလိုဆိုရင်အချိန်နှင့်ခွန်အားကို Webify နဲ့ချွေတာပါ။ ဤ WordPress အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်ဆောင်ပုဒ်သည်သင့်အားလျင်မြန်စွာလည်ပတ်နိုင်စေမည့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ tool သည်မည်သည့် coding နှင့်ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတကိုမဆိုသင်ဘယ်တော့မှမေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆွဲဆောင်မှု ရှိ၍ စာမျက်နှာဖန်တီးသူနှင့်အတူမည်သူမဆိုသူတို့၏ဖန်တီးမှုစိတ်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်သည်။ Webify သည်ဖက်ရှင်စီမံကိန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဤနေရာနှင့်ဤနေရာတွင်အနည်းငယ်ညှိချက်များဖြင့်၊ သင်သည်ဤကိရိယာကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုရောင်းရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဓိကသရုပ်ပြပစ္စည်းများအပြင်၊ အခြားအပြင်အဆင်များ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်ခေါင်းစီးများနှင့်အောက်ခြေနှစ်ခုတို့ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တရာ shortcodes နှင့်န့်အသတ် sidebars ။ အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်ပြီးအပြစ်အနာအဆာကင်းသောစျေးဝယ်မှုအတွေ့အကြုံအတွက် Webify သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အတွက်အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှုနှင့် browser လိုက်ဖက်မှုကိုလည်းအာမခံသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ်
ကုန်သည်သည် WooCommerce အဓိကအကြောင်းအရာ
။ ၎င်းကို Standard WooCommerce eCommerce plugin suite တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Merchandising သည် WPBakery စာမျက်နှာများ၊ မီးစက်မှတစ်ဆင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများစွာပါသောထုတ်ကုန်များစာရင်းကြီးများကိုစျေးကွက်တင်ရန်လွယ်ကူစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ Avanceas ။ ယခု Merchandiser ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အမှန်တကယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
Uncode ဟာအင်အားကြီးမားပြီးအသုံးများတဲ့ eCommerce အခင်းအကျင်း။ အလိုအလျောက်ထိုးဖောက်နိုင်ပြီးတိုးတက်လာသော WPBakery
ဆွဲတင်။ စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူ၊ ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့် Revolution Slider နှင့် Layer Slider plugins နှင့် WooCommerce နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော eCommerce လုပ်ဆောင်ချက်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်အမျိုးမျိုးအတွက်အွန်လိုင်းအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဤအကြောင်းအရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စံချိန်တင်စတိုးဆိုင်များမှစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များအထိ Uncode သည်သူတို့အားလုံးကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုကြည့်နိုင်သည်။ ယနေ့ Uncode ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ဝဘ်စတိုးသည်မည်မျှလွယ်ကူစွာပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုသိရန်အံ့အားသင့်ပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ် Demo
>a> E-commerce စွမ်းဆောင်ရည်သည်သင့်အတွက်အဆင်ပြေစေရန် Shopkeeper တွင်အပြည့်အ ၀ တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်သင်ပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာရောင်းနိုင်ခြင်း၊ မကြာသေးမီကစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုများကြောင့်၎င်းသည်စျေးကွက်ထဲရှိအမြန်ဆုံး WooCommerce themes များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ်
ဟယ်လီနာသည်ဆိုက်၏အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝက်ဘ်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနေ့ချင်းညချင်းအွန်လိုင်းမှရယူရန်ကြံစည်သည့်ကိရိယာတစ်ခု။ သင်၏ visitors ည့်သည်များကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကတ်တလောက်များဖြင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ တက်ကြွသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ရှေ့တန်းမျက်နှာပြင်များနှင့်အတူပါ ၀ င်ပါစေ။ Awesome AJAX စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းသူတို့လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်အောင်ပြုလုပ်စေသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များခေတ်မီသရုပ်ပြတပ်ဆင်သည့်နေ့၌စတိုးဆိုင်အမျိုးမျိုးကိုစတိုးဆိုင်ဖွင့်ခွင့်ပြုသည်။ အလိုအလျောက်အဆင့်မြင့်အမြင်အာရုံစာမျက်နှာတည်ဆောက်သူနှင့်အတူမိနစ်ပိုင်းအတွင်း၎င်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများစွာဖြင့်သင်၏ Halena ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏စတိုးဆိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီပြီးသင်၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူရှာဖွေမှုအတွေ့အကြုံ၏ကဏ္ aspect တိုင်းကိုညှိနှိုင်းပါ။ Halena သည်သင့်အားယောက်ျားကြီးများနှင့်သင်ဆော့ရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ သင်၏ပစ္စည်းများကို Halena ဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo The Hanger
အကယ်၍ သင်က eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါကအွန်လိုင်းစတိုး The WordPress Hanger ၏အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ မင်းအတွက်လုပ်ပေးပါ ဆော့ဝဲအစုအဝေး၌, ဆောင်ပုဒ် k အနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်အတူအမြန်ဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုရန်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မင်းလိုမကြာမီတွင်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ The Hanger တွင်သင်ကဲ့သို့သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးနိုင်သည့် box-out-of-the-box ပါဝင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုရှိရန် live demos များကိုသာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
သို့သျောလညျး, သငျသညျ The Hanger ၏အပိုငျးတစျခုစီကိုညှိ။ ၎င်းငျးကိုသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကို T. သို့လိုကျလြှောကျနိုငျပါတယျ။ နှင့်အညီတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ The Hanger လွယ်ကူစွာကအားလုံးကိုကိုင်တွယ်။ e-commerce သည်အဓိကကျသည့်အချက်တစ်ခုအပြင် The Hanger သည်လည်းသပ်ရပ်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဤကဏ္သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်စျေးကွက်ကိုအလွတ် ထား၍ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးမပြုလိုပါ။ More Info / Download
A Wordo ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်ခန်း၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော Hongo ကဲ့သို့သော , သင်တစ်ချက်ချင်း၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အလိုက်အထိုက်နေတတ်ခြင်း ty နှင့်အတူ, ဟောင်ကောင်အများအပြား, များစွာသောအလုပ်အကိုင်အများ၏ပြီးစီးသေချာ။ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်း tick ။ အ ၀ တ်အစားများ၊ အိတ်များ၊ နာရီများ၊ ကိရိယာများ၊ သားရေကုန်ပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုသင်ရောင်းချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဟောင်ကောင်နှင့်အတူအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ချက်ချင်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက်သင့်အတွက်သင့်အတွက်အဆင်သင့်သုံးနိုင်သောပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ အကယ်၍ သင်သည် out-of-the-box ကိုကြည့်လျှင်ဟောင်ဂိုသည်ကလစ်အနည်းငယ်သာဖြင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအာမခံသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်အစွမ်းထက်သောနှင့်အသုံးပြုသူအားဖြင့်ပုံသေပုံဟန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ချစ်စရာကောင်းသော WPBakery စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူ။ အခြားဖြစ်နိုင်သမျှ e-commerce ဒြပ်စင်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများလည်းသဘောတူညီချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ဆန္ဒစာရင်းနှင့်အမြန်ကြည့်ရှုခြင်းမှမြန်ဆန်စွာစီစစ်ခြင်းစနစ်၊ အရောင်တောက်ပမှု၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောနဖူးစည်းစာတန်းများနှင့် catalog mode သို့ဟောင်ကောင်သည်သင်စိတ်ကူးနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
More 'infos / Download Demo CiyaShop
CiyaShop သည်အွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့သပ်ရပ်။ သပ်ရပ်သော WordPress online store theme ဖြစ်သည်။ ဤစွယ်စုံသုံးကိရိယာသည်အီးကောမတ်စ်ပလက်ဖောင်းများတည်ဆောက်ရာတွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သင်ကြုံတွေ့ရမည့်တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုကိုအတူတကွသွားပါ၊ သေတ္တာပြင်ပ၌စဉ်းစားပါနှင့် CiyaShop မှကျေးဇူးတင်စကားအသစ်များသင့်ရှေ့တွင်သင့်ရှေ့တွင်ပွင့်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်လိုအပ်သည်ဆိုပါကထည့်သွင်းထားသောသရုပ်ပြလေးဆယ်ကိုကြည့်ပြီးဤဆွဲဆောင်မှုရှိသော site template နှင့်ဘာဖြစ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။
CiyaShop ကိရိယာတွင်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ သင်အဆင်ပြေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ သို့သော် ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်တပ်ဆင်ပါ။ သင်၏သရုပ်ပြကိုမျက်လုံးမှိတ်။ စတင်ပါ။ CiyaShop တွင်ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသည့်အပြင်အဆင်များနှင့်ကဏ္ 160 ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်၊ တိုက်ရိုက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပရီမီယံပလပ်ဂင်များစွာရှိသည်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။ ယနေ့ CiyaShop ဖြင့်အွန်လိုင်းကို စတင်၍ စတင်ပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ် Demo
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည် MyMedi နှင့်အလျင်အမြန်ဖြစ်သည်။ MyMedi ကိုသင်ဂရုစိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အခါမိမိကိုယ်ကိုလေးလံစွာမတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်က MyMedi ကိုသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ပြီးမြောက်အောင်သာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းကိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာများကိုတောင်ဖန်တီးခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
MyMedi ကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများ၊ မိုဘိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်မှု၊ Slider Revolution, Wishlist, လူမှုရေးဝေမျှခြင်းနှင့်မကြာခဏဝယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြပေးသည်။ ရောင်း ၀ ယ်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဘလော့ဂ် လုပ်၍ သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo
Aora ဟာ WordPress ထဲကစတိုးဆိုင်အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆက်စပ်အရာအားလုံးအတွက်လိုင်း လှပပြီးထိရောက်မှုရှိသော eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးပါ။ ကြိုတင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်အပြင်အဆင်များနှင့်ဆွဲချကာချခြင်းနည်းစနစ်များဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကိုစတိုင်ကျစွာစတင်ရန်အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။
Plus, Aora သည်သင်၏အွန်လိုင်းစတိုး၏ရှုထောင့်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအားလုံးကိုဂရုစိုက်သည်။ , ခပ်သိမ်းသောကာလ၌တစ်ကြောက်မက်ဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်သေချာ။ လှည်းထဲသို့ထည့်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ရှာဖွေခြင်း၊ Flash ရောင်းချခြင်း၊ Slider Revolution နှင့်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ဖော်ပြသင့်သည်။ Ning ။ သို့တိုင်, Aora Kit နှင့်သင်ရရှိရန်များစွာရှိသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ် Demo လက်ဝတ်ရတနာ
ရတနာလက်ဝတ်ရတနာများဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကာလအတွင်းအကောင်းဆုံးအဖော်များဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အွန်လိုင်းလက်ဝတ်ရတနာစတိုး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကြောင့်လူတိုင်း၏အာရုံကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်လိမ့်မည်။ အညွှန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ရွေးချယ်နိုင်သောအတွင်းပိုင်းစာမျက်နှာများရှိသည်။ အားလုံးတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ကျောက်မျက်ရတနာပုံစံကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တွင်စတိုင်ဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ စတင်လေ့လာသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများစွာကိုသင်မွေ့လျော်နိုင်ပြီးအခြေခံများကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်သင်ခန်းစာများစွာကိုလည်းသင်ခံစားနိုင်သည်။
အခြားရတနာလက်ဝတ်ရတနာများသည် scroll scroll, menu overlay, scrolling animations နှင့် online journal module တစ်ခုဖြစ်သည်။ သတိရပါ၊ Bijoux သည်လက်ဝတ်ရတနာတံဆိပ်များအတွက်အံ့ဖွယ်ရာများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo Orson
Orson ဟာ WordPress အွန်လိုင်းစတိုးဝက်ဘ်ဆိုက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အရင်းအမြစ်ပြည့်ဝသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ရန်အတွက်ဆန်းသစ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အွန်လိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက် tick လုပ်ပါ။ အားကောင်းသော built-in WPBakery Page Builder နှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းများသည်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ Orson သည်စီးပွားဖြစ်အသုံးချခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမှုတစ်ခုစီကိုသင်ဖြန့်ဝေနိုင်သည့်မတူညီသောပင်မစာမျက်နှာ ၂၃ ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ မျက်နှာအသစ်များရှိသည့်နွေရာသီဖက်ရှင်စတိုးများသို့မဟုတ်လူငယ်နည်းပညာလက်လီဆိုင်များ။ တွဲဖက်ပစ္စည်းများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ
၊ အားကစားပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ Orson သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာသော စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်လိမ္မာပါးနပ်သောစာမျက်နှာအမြောက်အမြားရှိသောစျေးဆိုင်များကိုကလစ်အနည်းငယ် နှိပ်၍ ဖန်တီးပါ။ သရုပ်ပြခြင်းကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတင်သွင်းပြီးအလိုလိုအလိုအလျောက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။ ကြီးကျယ်သောအင်္ဂါရပ်များရရှိရန်သင်၏ယခင်ကုဒ်အတွေ့အကြုံသည်အရေးမကြီးပါ။ Orson စတိုးဆိုင်များသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တူသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ header style တွေနဲ့ nifty wallet shortcodes တွေကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်တယ်။ အဆိုပါတော်လှန်ရေး Slider ကို alလှပသော carousels နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆလိုက်ရှိုးများကိုတုပပါ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကိုကြည့်စဉ်ပရိသတ်ကိုစေ့စပ်ထားနိုင်သည်။ SEO ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Orson ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်တွင်ခိုင်မာသောကစားသမားဖြစ်စေသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ယာဉ်အသွားအလာ၊ ရောင်းအားနှင့် ၀ င်ငွေကိုတစ်ညလုံးတိုးပွားစေသည်။ WooCommerce ပလပ်ဂင်သည် Orson ၏အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသောစီးပွားရေးစွမ်းရည်များ၊ ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးများမှစျေးဝယ်လှည်းများအထိဖြစ်သည်။ Orson နှင့်အတူယနေ့အရောင်းအဝယ်လုပ်ပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
e-commerce ဆောင်ပုဒ် ။ ဒီခေါင်းစဉ်မှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့သရုပ်ပြကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၁၂ ခုကျော်ပါဝင်တယ်။ အံ့သြဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ၊ အစွမ်းထက်သည့် Parallax အမြင်အာရုံရွေးချယ်မှုများနှင့် AJA ရှေ့တန်းစျေးဝယ်လှည်းများ၊ကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သော X … Atelier Showcase သည်အွန်လိုင်းစတိုးဖန်တီးမှု၏အစစ်အမှန်စွမ်းအားကိုအဆုံးသတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ စျေးကွက်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးဘက်စုံသုံးအီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခင်းအကျင်းဖြစ်သော Native SEO နှင့်တုန့်ပြန်မှုအပြည့်အစုံ Atelier အပေါ်သဘောတူညီမှုကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
More Info / Download Demo Mr. ချုပ်
Mr. Tailor သည်ခေတ်မှီသောအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်အပြည့်ပါသော slider နှင့်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်လက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ရောင်းလိုသောအဝတ်အထည်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သင့်တော်သည်။ အကယ်၍ သင်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုမဖန်တီးလိုပါက၊ သင်ဤစီးပွားရေးခေါင်းစဉ်ကို သုံး၍ သင်၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန် (သို့) သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြသရန်ရွေးချယ်စရာများဘောင်မှ၎င်း၏အီးကောမတ်စ်အင်္ဂါရပ်ကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။
Mr. ။ Tailor WordPress အခင်းအကျင်းသည်သင့်အတွက်ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကိုပေးသည်။၎င်းတို့သည်အကန့်အသတ်မရှိအရောင်ရွေးချယ်မှုများ၊ parallax ပုံရိပ်အထောက်အပံ့၊ စိတ်ကြိုက်လိုဂိုတင်ပို့ခြင်း၊ စွဲစွဲလန်းလန်းခေါင်းစီး၊ built-in ဆလိုက်ဒါများ၊ အခင်းအကျင်း၏ built-in WPBakery စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူသည် drag and drop interface ကို အသုံးပြု၍ အကန့်အသတ်မရှိစာမျက်နှာ layout ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Mr. Tailor သည်သင် WooCommerce သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ အခင်းအကျင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများ၊ အကန့်အသတ်မရှိသောအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားခွဲများ၊ ပါ ၀ င်သောကူပွန်စနစ်၊ ငွေပေးချေမှုစာမျက်နှာ နှင့်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂဏန်းတွက်စက်တို့ရှိသည်။ Mr. အပ်ချုပ်သည်ဖောက်သည်များအားသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ရန်၊ သင်၏စတိုးဆိုင်အစီရင်ခံစာနှင့်ဆန္ဒရှိသည့်စာရင်းစာရင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ်
Vapas သည်အွန်လိုင်း vape စတိုးများအတွက် WordPress ဝဘ်စတိုး၏ကြမ်းတမ်းပါသည်။ vaping ၏လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူ, သင်သည်လည်းစက်မှုလုပ်ငန်းဝင်ချင်သောကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ အင်အားကြီး။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Vapas ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုကိုအလျင်အမြန်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်ရန်မလိုဘဲ vaping ထုတ်ကုန်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိုလားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့စတင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ကြိုတင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်အပြင်အဆင်များနှင့် WPBakery စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့်မည်သူမဆိုပထမတန်းစားအဆုံးထုတ်ကုန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဘလော့နှင့်အခြားအတွင်းခန်းစာမျက်နှာများစွာသည်အစုစပ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ။ Plus အား၊ သင်သည် widgets တန်ချိန်၊ Slider Revolution၊ Ajax ရှာဖွေမှု၊ mega menu ၊ nifty animations နှင့် mob menu တို့ကိုရရှိသည်။ကျွန်းကောင်းလည်းဖြစ်သည်။ အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်၍ Vapas နှင့်ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ်
အော်ဂဲနစ်နှင့်အစားအစာဆိုင်များအတွက် Mildhill သည် WordPress ၏အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံးဝအွန်လိုင်းရှိနေခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ဆောင်ပုဒ်။ ကွဲပြားသော၊ ဖန်တီးမှုနှင့်အလွန်အကျိုးသက်ရောက်သောသရုပ်ပြကိုးခုအနက်မှတစ်ခုဖြင့်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Mildhill ၏အပြင်အဆင်များအားလုံး ၁၀၀% စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ကုဒ်တစ်ခုတည်းကိုထိရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ WPBakery page builder ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မည်သို့ပင်ရှိပါစေအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နိုင်သည်။
Mildhill သည်လူစုလူဝေးထဲမှထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အထောက်အကူပြုသောစိတ်ချရသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပါရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းစာမျက်နှာများ၊ ဘလော့ဂ်အပြင်အဆင်များ၊ အတိုကောက်ကုဒ်များနှင့်ခေါင်းစီးပုံစံများ။ခေါင်းကိုအားလုံးသတ်မှတ်ပြီးသင် Mildhill မှအများဆုံးရရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ one-cli ck သရုပ်ပြအချက်အလက်တင်သွင်းသူကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီးတိုးတက်မှုရှိသော Mildhill ဖြင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်စတင်ပါ။
> e-commerce ၌။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုအထူးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ရှာဖွေပြီးထိပ်တန်းအရည်အသွေးပလပ်ဂင်များစွာနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ Artemis တွင်တုန့်ပြန်မှုအများအပြားရှိသောမီနူးများနှင့်အကန့်အသတ်မဲ့အရောင်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ၎င်းတွင် dynamic store sidebar, blog page နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောနောက်ခံများပါဝင်သည်။ သငျသညျကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပိုင်းအတ္တနှင့်မျက်နှာသာတွေ့လိမ့်မည်။ အေးမြသောအွန်လိုင်းစတိုးများတည်ထောင်ရန် Artemis သည် WooCommerce ပေါင်းစည်းမှုကိုပေးသည်။ သူ့မှာရှိတယ်minicart၊ ဆန္ဒစာရင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာလည်းရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များကိုပြသရန်အမျိုးမျိုးသောပြခန်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစမ်းကြည့်ပါ။
Slider Revolution ပေါင်းစပ်ခြင်း
ပုံသည်အကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးကိုရရှိစေပါသည်။ Artemis သည် po နှစ်ခုစလုံးအတွက်ဘာသာပြန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်များနှင့်အပြည့်အဝအမြင်အာရုံ display ကိုဖြည့်စွက်နှင့်အတူထုပ်ပိုး။ ၎င်းသည်သင့်အား lookbook၊ ထုတ်ကုန်ကိုလျင်မြန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီး menu basket ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုပေးသည်။ တီထွင်သူများက Artemis ကိုအကောင်းဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ရုံသူမ၏နတ်ဘုရားမ၏သူမ၏နာမကိုအမှီလိုပဲ။ ၎င်းသည် ၁၀၀% ဖြစ်ပြီးဖန်သားပြင်များ၊ ပုံစံများနှင့်ဘရောင်ဇာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဘက်စုံသုံး! ဒါဟာအခမဲ့ updates များနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူကြွလာ! အာတေမိကိုအကြည့်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးသူသည်သင့်အားသူ၏ရူးသွပ်သောအလားအလာဖြင့်သင့်ကိုစည်းရုံးလိမ့်မည်ဟုသင်သေချာစွာပြောလိမ့်မည်။ Artemis ကိုသုံးပါ။
နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ် Demo June
J.a သည်ဘက်စုံသုံး၊ စိတ်ချရသောနှင့်စွယ်စုံသုံးနိုင်သော WordPress e-commerce ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်နှင့်ထူးခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ချောမွေ့သောကိရိယာများ။ သင်၏အလုပ်ကိုချောမွေ့စေရန်ပလပ်မီပလပ်အင်များ၊ သရုပ်ပြဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စာမျက်နှာတင်းပလိတ်များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံကိုပြုပြင်ခြင်းသည်သင့်အားကုဒ်မျဉ်းတစ်ကြောင်းရေးစရာမလိုဘဲ pro လိုဒီဇိုင်းဆွဲစေသည်။ အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များသည်ဇွန်လတွင်အလုပ်လုပ်လိုကြသည်။ အံ့ portfolio စရာကောင်းသည့်အစုစုစာမျက်နှာများနှင့်ထူးခြားသောထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများကသင်၏ထုတ်ကုန်များကိုစတိုင်ဖြင့်ပြသသည်။ Slider Revolution နှင့် LayerSlider သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုစတိုင်ဆန်သောကာတွန်းပုံများဖြင့်စွဲမှတ်စေသည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် iLightbox နှင့် Apple Live Photo အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများသည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုထင်ရှားစေသည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော WooCommerce မူဘောင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များအားချွေးမကျဘဲစျေးကွက်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သိုလှောင်ထားသည့်ဇယားကွက်များ၊ စာရင်းများနှင့်စိတ်ကြိုက်စီစစ်ထားသောစစ်ထုတ်မှုများကသင်၏စတိုးဆိုင်ကို ၂၁ ရာစုသို့ယူဆောင်လာသည်ရာစုနှစ်။ တုံ့ပြန်မှုနှင့်အပြန်အလှန်သဟဇာတဖြစ်သောဇွန်လသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုတစ်ညလုံးတိုးချဲ့သည်။ ယနေ့ဇွန်ကိုသွားပြီးသင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုကြည့်ပါ။
မြို့တွင်းရှိအပြောင်းလွယ်ဆုံး WooCommerce စတိုးနဲ့ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ပါ။ Shoperific, WordPress အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်ဆောင်ပုဒ်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုအာရုံစိုက်သောဤဆိုက် template သည်သင့်အားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များကိုပြသရန်၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သင့်ဖောက်သည်များအတွက်လိုချင်သောစာရင်းများကိုထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုထည့်ပါ။ ထို့အပြင်၊ အကြောင်းအရာများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်ဘလော့ဂ်ကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးကိုပိုမိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တင်းပလိတ်အားလုံးသည်အပြည့်အဝပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ui သည်၎င်းကိုစနစ်တကျအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ element အမျိုးမျိုးတွင်စိတ်ကြိုက်မီနူး၊ ကောင်တာ၊ တိုးတက်မှုဘား၊ ဈေးနှုန်း၊ ကုန်ပစ္စည်းနှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ဂူဂဲလ်မြေပုံများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်သင် Shoperific ကသင့်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသောဒြပ်စင်များကြောင့်သင်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်ကျွမ်းကျင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ်
Handy စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စိတ်ချရသောဘက်စုံသုံး WordPress အခင်းအကျင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ကိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အထူးပြုသောအွန်လိုင်းစတိုးများ၌ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တိကျသေချာစွာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောခိုင်မာသည့်ဘက်စုံသုံး WordPress ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ - အလိုအလျောက်သိမြင်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသော၊ လူတိုင်းမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့်အစွမ်းထက်သော back-end အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအွန်လိုင်းကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေး။ အားလုံးသောအချက်များမှာ Handy သည်လက်မှုပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အွန်လိုင်းစတိုးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
Aurum သည်အမြင်အာရုံဖြင့်အမှတ်ရစရာနှင့်ဖော်ပြနိုင်သော WordPress online store theme ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များအတွက်ထိရောက်ပြီးထိရောက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာရန်အထူးဖန်တီးထားသောဆောင်ပုဒ်။ developer များက၎င်းကိုခေတ်မီသောအွန်လိုင်းစတိုး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအပြင်အဆင်များ၊ တင်းပလိတ်များ၊ ဝစ်ဂျက်များ၊ ကိရိယာများနှင့်တိုတောင်းသောကုဒ်များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ သို့သော် Aurum ၏တကယ့်အစွမ်းသည်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှပသောဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤအခင်းအကျင်းသည် Aurum ၏တင်းပလိတ်စာမျက်နှာများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အရောင်အသွေးစုံသည့်အသေးအဖွဲမျှသာဖြစ်သည်။
Aurum သည် ဖက်ရှင်စတိုးများ ၊ လက်ဝတ်ရတနာစတိုးဆိုင်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်များ၊ နည်းပညာစတိုးဆိုင်များ နှင့်အခြားအစွမ်းထက်သောအွန်လိုင်းစတိုးများအပါအ ၀ င်အထူးစတိုင်ဆန်သောစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းစတိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ e-commerce လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ သင်နှစ်သက်သောမည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မဆိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဤဆောင်ပုဒ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သန့်ရှင်း။ အေးမြသည့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောအတွက်အလွန်လှပသည်။ ထို့အပြင် Aurum သည်ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသောခေါင်းစဉ်များ၊ လှပသောကြိုဆိုသည့်စာမျက်နှာများ၊ စိတ်ကြိုက် WPBakery Page Builder လိုင်းတိုများနှင့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအတွက်အင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Aurum သည်တောက်ပသောအရာများသည်တခါတရံတွင်ရွှေဖြစ်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြနေသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo
Nantes ဟာသုံးချက်တစ်ချက်အလွန်ဖော်ပြမှုနှင့်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ WordPress ကိုတုံ့ပြန်မှု Multi- ရည်ရွယ်ချက်အီလက်ထရွန်နစ်ငါ့ကို။ Nantes သည်အချက်သုံးချက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်သင်အကြားရှိစိတ်ကူးစိတ်သန်းများပြားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလွယ်တကူစျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်အများပြည်သူတို့အားကမ်းလှမ်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောဝက်ဘ်ဆိုက် application များအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော AJAX ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအရိုးများကိုထုတ်လုပ်ရန် webmaster ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း။
Nantes သည်ဘောလုံးကိုဥယျာဉ်မှအချက်သုံးချက်တွင်တွေ့သည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသောကော်ပိုရိတ်၊ အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ယေဘုယျအွန်လိုင်းစတိုးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤဆောင်ပုဒ်သည်၎င်း၏ထူးခြားသောဆွဲချခြင်းနှင့်စာမျက်နှာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် WooCommerce အတွက်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားသည့်ပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင် Nantes တွင်ခမ်းနားသောမိုဘိုင်းမီနူးတစ်ခုရှိပြီးလျှောကျ။ ထိတွေ့နိုင်သောပစ္စည်း၊ တောင်းတစ်ခု၊ AJAX ခြင်းတောင်း၊ ရှာဖွေခြင်းထုတ်ကုန်များနှင့် filter များ။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Nantes သည်အလွန်များပြားသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်သောအရာများသည်ဆိုးရွားစေသည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက် / ဒေါင်းလုပ်
မြောက်မြောက်သည်လှပသော ကုန်သွယ်မှုအခင်းအကျင်းဖြစ်သော WordPress ဘက်စုံသုံးဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်။ ဒီဆောင်ပုဒ်သည်ကျွမ်းကျင်စွာကြည့်ခြင်း၊ North သည်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောဖက်ရှင်အွန်လိုင်းစတိုးများ၊ အလုပ်ရုံအွန်လိုင်းဆိုင်များစသည့်အထူးပြုနယ်ပယ်များအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းစတူဒီယိုအွန်လိုင်းစတိုးများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တီထွင်မှုအွန်လိုင်းစတိုးများ၊ အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်အနုပညာပြခန်းအွန်လိုင်းစတိုးများနှင့်အခြားအလားတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါသည်။ ထို့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားသည် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းသော၊ သင်သည်ပေါက်ကွဲလွယ်သောသက်ရောက်မှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဝဘ်စာမျက်နှာများကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းလည်း coding knowledge မလိုအပ်ပါ။။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအဆင့်မြင့်မီနူးများ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်ဘေးထွက်ဘားများနှင့်လှပသောထုတ်ကုန် carousels များကို သုံး၍ ချောချောမွေ့မွေ့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော browsing အတွေ့အကြုံကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ ဤအခင်းအကျင်းတွင်မေးရိုးကျဆင်းသောထုတ်ကုန်များ၊ ငြိမ် Parallax စာမျက်နှာများ၊ ဇာတိ WooCommerce ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပါ ၀ င်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားသည်မည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုသိသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ >
Oxygen ဟာလှပပေါ့ပါးတဲ့ WooCommerce WordPress အခင်းအကျင်း။ ပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံသောဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော WooCommerce အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖန်တီးသူများကဤနေရာလေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်ပုဒ်သည်ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏ပုံရိပ်ကိုထိန်းသိမ်းလိုသောအသေးစားနှင့်အလတ်စားအွန်လိုင်းစတိုးများအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်။
The multiple mသင်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည့်အောက်စီဂျင်စာမျက်နှာအပြင်အဆင်နှင့်စာမျက်နှာပုံစံများအားလုံးသည်ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူလမ်းညွှန်အတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်သည်။ ထို့အပြင်ဤဆောင်ပုဒ်သည်သင့်အားတစ်ချိန်တည်းတွင်အိမ်၌နေစေခြင်းအားဖြင့်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်လျှောက်လုံးသင့်အားလမ်းပြစေသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်၏ငွေကိုဖြုန်းရန်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သည်များဖြစ်လာရန်သင့်ဖောက်သည်များအားအဆင်ပြေစေသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သူတို့သည်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှပြန်လာပြီး ၀ ယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Oxygen ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသော sidebar အင်္ဂါရပ်များ၊ ခေါင်းစီးပုံစံများနှင့်လက်တွေ့ဒီဇိုင်းများသည်သင့်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးပွားစေပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် Oxygen သည်အဆင့်မြင့် AJAX ကိရိယာများနှင့် HTML5 အင်္ဂါရပ်များကို သုံး၍ မည်သည့်အွန်လိုင်းစတိုးသို့မဆိုလတ်ဆတ်သောလေကိုရှူနိုင်သည်။ ဒီနေ့စမ်းကြည့်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ / ဒေါင်းလုပ် Demo Colorlib သို့လာပြီးဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကအရမ်းတန်ဖိုးထား! ထိန်းသိမ်းပါ href= WordPress themes များ] ကိုအသုံးပြုပြီး ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဘယ်လို href=> ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာချင်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်ဖော်ပြပါထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားကော်မရှင်လက်ခံရရှိပါစေ။ ဤစာမျက်နှာ၏ထင်မြင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များအတွက်ထပ်ဆောင်းဆုကြေးမရရှိနိုင်ပါ။
23 အစိမ်းနှင့် eco-friendly wordpress themes များ 2021
2021-07-21 18:38:49 | ဝဘ်ဆိုက်...
ဤသည်မှာစျေးကွက်တွင်ရနိုင်သောအလွန်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအစိမ်းရောင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော WordPress themes များ၏စာရင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေဟစနစ်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ၏နှိမ့်ချသောနိုင်ငံသားဖြစ်စေ WordPress ပလက်ဖောင်းများကသင့်အားစကားပြောနိုင်သည...
2021 hipsters အတွက်အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးနှင့် retro wordpress ကို themes များ
2021-07-21 18:25:32 | ဝဘ်ဆိုက်...
ယခုခေတ်ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားစေရန်အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်နှင့် retro WordPress အခင်းအကျင်းကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဒီနေရာတွင်အသေးစားစီးပွားရေး၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆံပင်အရောင်းဆိုင်၊ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားသူများအတွက်အကောင်းဆုံး hipster ခေါင်းစဉ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ လူများသည်အတိတ်ကာလတစ်...
ထိပ်တန်း 25 အကောင်းဆုံး wordpress themes များ 2021
2021-07-21 18:17:41 | ဝဘ်ဆိုက်...
သရုပ်ပြခြင်းများ၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်လွယ်ကူသောစာမျက်နှာတည်ဆောက်ခြင်းများပါ ၀ င်သောအကောင်းဆုံး WordPress themes အသစ်များကိုအသေအချာဂရုတစိုက်ကောက်ယူစုဆောင်းထားခြင်း။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည်၎င်း၏သဘောသဘာဝအရအခွင့်အရေးယူသည်။ ကုန်သည်ကောင်းတစ် ဦး သည်အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မျှအသုံးမချနိုင်ပါ။ အင်တာနက်သည်ကြည့...
27 အကောင်းဆုံး wordpress မင်္ဂလာဆောင် themes များ 2021
2021-07-21 17:59:34 | ဝဘ်ဆိုက်...
၂၀၂၁ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံး WordPress မင်္ဂလာဆောင်အခင်းအကျင်း၏ပြည့်စုံသောစာရင်း။ ဤအကြောင်းအရာများသည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအားပြသရန်အမှတ်ရစရာမင်္ဂလာဆောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန်အရာအားလုံးရှိသည်။ သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သည်သင့်ဘဝ၏အရေးကြီးဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံပြီးဖြ...
၄၃၂ လူကြိုက်များသောဘက်စုံသုံးစာလုံးပေါင်းအခင်းအကျင်း ၂၀၂၁
2021-07-21 17:26:43 | ဝဘ်ဆိုက်...
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သုံးစွဲသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာအတွက်အသုံးအများဆုံး WordPress themes များကိုသုံးနိုင်သလား။ (သူတို့ကမသိဘဲ။ ) နိဂုံး? ငါလောင်းနိုင်တယ် အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်ရာပေါင်းများစွာသောအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသရုပ်ပြအရေအတွက်၊ သူတို့နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့စက်ရုံအရေအတွက်န...
2021 ၏ 23 အကောင်းဆုံးဘဏ္financialာရေးကုမ္ပဏီ wordpress ကို themes များ
2021-07-21 17:10:43 | ဝဘ်ဆိုက်...
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေချေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် WordPress ၏ဘဏ္themesာရေးခေါင်းစဉ်များကိုလေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖိအားသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှကြီးမားသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်၊ လောင်းကြေးများမျှမျှတတရှိသည့်အလယ်အလတ်...
အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ်များအတွက်လက်ဝတ်ရတနာစကားလုံး ၁၆ ခု
2021-07-21 16:53:39 | ဝဘ်ဆိုက်...
လက်ဝတ်ရတနာများကိုပြသရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက် eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်ရန်သင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ဤလက်ဝတ်ရတနာများ WordPress အကြောင်းအရာများသည်သင်၏လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းကိုပြသရန်နှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်ပြသရန်လိုအပ်သည့်အတိအကျဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအများစုသည်ယုတ်ညံ့သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်စီးပွားရေ...
2021 ၏ 30 အတိုင်ပင်ခံ wordpress themes များ
2021-07-21 16:41:31 | ဝဘ်ဆိုက်...
ယနေ့သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ခေတ်မီဆုံးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပေးသော WordPress ခေါင်းစဉ်များစာရင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမှော်အတတ်ဖြင့်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ကိုငှားရမ်းရန်အဖိုးအခများစွာပေးဆပ်ခြင်းထက်သင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသပ်ရပ်သောခေါင်းစဉ်ဖြင့်အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည...
ထိပ်တန်း 17 Affiliate စျေးကွက် Wordpress ကို Themes 2021
2021-07-21 16:32:27 | ဝဘ်ဆိုက်...
တွဲဖက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလျင်မြန်စွာတည်ဆောက်လိုပါသလား။ တွဲဖက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဤ WordPress အခင်းအကျင်းများသည်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုအထင်အရှားဖော်ပြသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိခြင်းအားဖြင့်၊ လူသိများပြီးထူထောင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည...
18 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိဘောဂ wordpress themes များ 2021
2021-07-21 16:22:12 | ဝဘ်ဆိုက်...
ဤအရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂများစုစည်းထားသည့် WordPress အခင်းအကျင်းများသည်သင့်ဖောက်သည်အားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ဘဝ၏အရှိန်အဟုန်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကြိုတင်ဒီဇိုင်းပုံစံများသည်အထူးသဖြင့်သင်မလိုချင်သောအချိန်တွင်အမှန်တကယ်အချိန်သက်သာစေသည်။ အမှာစာ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မ...
Est21 2021 တည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံး woocommerce themes များ
2021-07-21 16:17:09 | ဝဘ်ဆိုက်...
မည်သည့် ecommerce အမျိုးအစားအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံး WooCommerce WordPress themes များကိုကြည့်ကြပါစို့။ လှပသောဒီဇိုင်း၊ သရုပ်ပြအမျိုးမျိုးနှင့်ကြီးမားသောအထောက်အပံ့တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ကျွ...
14 အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်အေဂျင်စီ wordpress themes များ 2021
2021-07-21 16:11:01 | ဝဘ်ဆိုက်...
ဤနေရာတွင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ပရောဂျက်အတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်အေဂျင်စီ WordPress အကြောင်းအရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဖက်ရှင်နှင့်မော်ဒယ်လ်အားလုံးသည်စွဲမက်စရာကောင်းလောက်အောင်လှပသည်။ မော်ဒယ်လ်များနှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများကိုသူတို့၏ထင်ဟပ်မှုဖြင့်ပြသသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားမျ...
အလွတ် 2021 အတွက်ထိပ်တန်း wordpress themes များ 25
2021-07-21 16:07:00 | ဝဘ်ဆိုက်...
သင်၏အခွင့်အလမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အထောက်အကူပြုသောအလွတ်များအတွက် WordPress အခင်းအကျင်းများကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ အင်တာနက်၏လူကြိုက်များမှုသည်အလွတ်သမားများအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်နေထိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူများအတွက်တံခါးများဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းလူများစွာသည်အိမ်မှအလုပ်လုပ...
ဗိသုကာနှင့်ဗိသုကာကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံး wordpress themes များ
2021-07-21 15:52:54 | ဝဘ်ဆိုက်...
ကိုယ်ပိုင်၊ ဗိသုကာနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဗိသုကာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဗိသုကာ WordPress အကြောင်းအရာများစုဆောင်းထားသောစုဆောင်းမှုများ။ ဗိသုကာသည်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့်နယ်ပယ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သင် ဦး ဆောင်မှုအနည်းငယ်သာရရှိ...
20 ကြောက်မက်ဘွယ်အခမဲ့ 2021 bootstrap navbars ဥပမာ
2021-07-21 15:37:28 | ဝဘ်ဆိုက်...
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Bootstrap navigation bar တင်းပလိတ်များဖြင့်အကောင်းဆုံး၊ အဆင်ပြေဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံး site navigation ကိုဖန်တီးပါ။ navigation bar သို့မဟုတ် menu သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ကိုသင်သိသည်။ သို့သော်၎င်းမှသင်လုပ်ရန်မလိုပေ။ ခြစ်ရာ။ TIME နှင့် MONEY ကို Save!...